Akhlaaqda Halkee Asal U Ah? (Qaybta 1-aad) – Maandoon
Akhlaaqda Halkee Asal U Ah? (Qaybta 1-aad)
March 1, 2017 March 1, 2017 Cabdi Ismaaciil 0 Comment
Akhlaaqduna dhankaas waxay kala mid tahay ciyaaraha la dheelo. Si loo kala garto in ciyaartooydu gafey iyo in kale, waa in marka hore ciyaartu xeerar leedahay. Haddii ciyaartu aysan xeerar lahayn, waxaa adkaanaya in la kala garto waxa ciyaartooydu uu saxay si looga abaalmariyo ama waxa uu khalday si loogu ganaaxo.
Ruuxu markuu eego akhlaaqdii ummadihii hore ee dunida, sida Masaaridii, Baabilidii, shiinihii, Hindidii, Giriiiggii, Roomankii, Carabtii , … , wuxuu ogaanayaa sida akhlaaqda ummadahaasi ay isugu dhaweyd, isla markaana ugu dhowdahay akhlaaqda dunida casriga ah ee aan ku noolnahay. Ummadahaasi dhanka aqoonta aad bay ugu kala duwanaayeen, balse dhanka akhlaaqda farqi la sheegaa uma dhaxayn.
Iyada oo kooban, qoladaani waxay ku dooddaa in si akhlaaq loo helo marka hore abuure loo baahan yahay (=We need God to be good), haddii taa la waayana dunida fasaad – been, khayaano, xasad, xaqiraad, xatooyo, dhac, dil, kufsi,,,- cammimayo. Waana kii mudane Fyodor Dostoevsky buuggiisa “Walaalaha Karamazov/The Brothers Karamazov” ku lahaa: “ Haddii Alle dhinto, wax kasta waa la fasaxaa.” Dostoevsky ka horna Voltaire baa wuxuu yiri: “ Haddii aan Alle jirin, waxaa lamahuraan noqonaya in la ikhtiraaco/ abuuro”.
Sida muuqata, fikradda qoladaan waxaa ka dhalanaya in akhlaaqdu isla beddesho hadba isbeddelka ku dhaca aragtida bulshada, oo waxaa suurogal ah in bulshadu wax ay shalay same u taqiin ay maanta xume u aqoonsato. Taa lidkeeduna waa dhici karaa, oo wax shalay khalad loo arkay ayaa maanta sax loo arki karaa. Tusaale ahaan, saddex boqol oo sano ka hor aadamiga badankiisu addoonsiga wax dhib ah uma arag, hayeeshee maanta waa adagtahay in la helo cid ku dhiirrata in ay si cad addoonsi u bannayso. Isbeddelka akhlaaqduna habeen iyo dharaar gudahood kuma dhaco, balse muddo dheer ayuu qaataa.
Qoladaani waxay ku doodeen in akhlaaqdu ka horraysey diimaha, isla markaana diimuhu arrimaha akhlaaqda la xiriira ay ka qaateen garashada dadka. Akhlaaqduna ay ka dhalato ogaanshaha ruuxu ogaado in dadka kale ay yihiin kuwo isaga/iyada la mid ah. Waxayna ku doodaan in bulshooyinka cawaanta ahi, inkasta oo ay ka facweyn yihiin bulshooyinka diimaha Samaawiga/Saamiga ah haysta, haddana aysan labada kooxood si muuqata ugu kala duwanayn dhanka akhlaaqda, oo ay isku si u canbaareeyaan beenta, dulmiga, khayaanada, muuddalnimada, anaaninnimada, eexda, naxariis darrada, dilka, dhaca, xatooyada, kufsiga, xasadka, nacaybka…iwm. Sidoo kale, waxay u wada riyaaqaan mabaadida sinnaanta, caddaaladda, xorriyadda, iskaashiga, nidaamka, hawlkarnimada, taageeridda iyo uturidda inta tabarta yar, ….iwm.
Dadku tan iyo goor hore, waa ku kala aragti duwan yihiin tirada ay tahay in haweenka laga guursado (hal, afar, … iyo boqol), laakiin sidaa oo ay tahay, haddana marna iskuma qaban in aadan xaq u lahayn in aad la baashaalto gabar kasta oo bilicdeedu ay indho-daraandar kuu keento.
Akhlaaqda oo diin lagu xiraa waxay keenaysaa in akhlaaqda lagu koobo bulshada diintaas haysata oo keliya, ummadaha kalena laga qadiyo. Weliba dadka diintaas haysta ayaa iyaguna dhexdooda akhlaaqda sii kala shinsanaya. Tusaale ahaan, Sunnada iyo Shiicadu inkasta oo ay hal diin ku wada abtirsadaan, haddana marka loo yimaado arrimaha la xiriira akhlaaqda midkoodna ma oggola in ay tan kale webiga akhlaaqda koob ka darsato, oo sunnadu ma aqbali karaan shiicaa akhlaaq leh, sidoo kalena shiicada lama soo marsiin karo sunnaa akhlaaq maqashay.
Si kastaba ha ahaatee, doodaha qodobkaan la xiriira ma aha kuwo lagu kala garqaato, aalaabana waxay u ekaadaan dooddii ahayd digaagga iyo ukunta keebaa horreeyey. Taasoo jirta, haddana arrin la rumaysan yahay in uu saamayn weyn ku leeyahay anshax wanaaggu, waa xeerka loogu yeero “jiheeyaha ama diiradda damiirka/ moral compass” ee oranaya: “Dadka ula dhaqan sida aad jeceshahay in laguula dhaqmo.” Eebbana quraanka wuxuu ku yiri: “ Wanaag abaalkiisu soo wanaag ma aha?/Hal Jasaa’u al-Ixsaani illaa al-Ixsaan”[Ar-Raxmaan 60]. Nebi Muxamedna (NNKH) waxaa laga wariyey in mar uu saxaabi la oran jirey Waabisa bin Macbad uu u tilmaamayey sida ruuxu samaha iyo xumaha ku kala garan karo, uu ku yiri: “Qalbigaaga la tasho … dadku waxay doonaan ha kuu fatwoodeene (=sheegeene)/ Istafti qalbak, … wa’in aftaaka annaasu wa’aftowka…”.
← Sidee diinta loo jadiidin karaa?
Calmaaniyiinteenna iyo tubtii islaamiyiinteenna! →